Global Aawaj | मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा यसरी अमेरिका छिर्छन् नेपाली मेक्सिकोबाट अवैध रूपमा यसरी अमेरिका छिर्छन् नेपाली
८ कार्तिक २०७८ 12:09 pm
कोलम्बिया। अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी चिट्ठाबाट हजारौं नेपाली अमेरिका पुगिसकेका छन् । अन्य कानुनी प्रक्रियाबाट अमेरिका पुगेका नेपालीको संख्या पनि निक्कै छ। त्यही भएर पनि नेपाली जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि अमेरिका छिर्न लालयित हुन्छन् ।
हरेक ल्याटिन अमेरिकी देशमा रहेका दलालले अत्यन्त जोखिमसाथ उनीहरुलाई स्थल वा जलमार्ग पार गराउँदै मेक्सिको पुर्‍याउँछन्, जुन स्थलमार्गबाट अमेरिका छिर्ने एक मात्र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक हो । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट मेक्सिकोसम्म पुग्न स्थल र जलमार्ग नै प्रयोग गर्नुपर्छ। स्थलमार्गबाट जाँदा कैयौं दिनसम्म हिँड्नुपर्ने भएकाले कतिपयले मेक्सिकोसम्म पुग्न हवाइजहाज पनि प्रयोग गर्छन् ।
यस्तो नक्कली पासपोर्ट बोकेर ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा यात्रा गर्ने विभिन्न मुलुकका अवैध आप्रवासीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिएको छ । कतिपय आप्रवासीलाई भाषा नजान्दा एयरपोर्टबाट फर्काउने गरेको समेत भेटिएको छ । ब्राजिलमा ९९ प्रतिशत व्यक्तिले पोर्चुगिज भाषा बोल्छन् । ब्राजिलबाहेक अर्जेन्टिना, पेरु, चिली, कोस्टारिका, एलसाल्भाडोर, होन्डुरसलगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा अधिकांशले स्पेनिस भाषा मात्र बोल्छन् । त्यही भएर पनि एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्वलगायत मुलुकबाट ल्याटिन अमेरिका छिरेका अवैध आप्रवासीलाई त्यहाँ भाषाको समस्या हुन्छ । इमिग्रेसनमा स्पेनिस भाषामा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा यसरी फर्काइएका व्यक्तिहरू धेरै छन् ।
ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट ज्यादै जोखिम उठाएर अवैध आप्रवासीलाई बस, ट्रक र कन्टेनरमा राखेर मेक्सिकोेसम्म पु¥याउने गरिएको पाइएको छ। मैले अध्ययन गरेसम्म ९८ प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी यसरी ट्रक र कन्टेनरमा यात्रा गर्छन्। अधिकांश नेपाली युवाहरुले पनि यस्तै सास्ती व्यहोर्छन्।
बटोमा रुटमा पर्ने हरेक देशका स्थानीय दलालले त्यहाँबाट सिमा कटाएर अर्को मुलुकसम्म पु¥याउने जिम्मा लिएका हुन्छन्। अर्को मुुलुकमा फेरि अर्को दलाल तयार भएर बसेको हुन्छ। बीचमा कुनै बाधा–व्यवधान भएन भने नेपालबाट हिँडेको व्यक्तिहरू कम्तीमा दुई साताभित्र युवाहरू ल्याटिन अमेरिका आइपुग्छन्। ट्रान्जिट, भिसा र अन्य प्रक्रियाले गर्दा अलि बढी समय पनि लाग्न सक्छ। यी सबै प्रक्रिया दलालले नै सेटिङमा मिलाउँछन्।
अधिकांश नेपाली युवाहरु सुरुमा ल्याटिन अमेरिकाको ब्राजिल आइपुग्छन्। उनीहरूले ब्राजिलमा पाइला टेकेपछि स्थलमार्गबाट यात्रा अगाडि बढ्छ। त्यहाँबाट पेरु इक्वेडोर, कोलम्बिया, पानामा र कोस्टारिका हुँदै दलालले उनीहरु लाई मेक्सिकोसम्म पुर्‍याउँछन् । ब्राजिलबाट हवाइजहाज, बस आदिबाट यात्रा गर्दै उनीहरू पेरु र इक्वेडोर हुँदै कोलम्बिया आइपुग्छन् । यसबीचको यात्रा, होटल र खानपानको व्यवस्था हरेक देशका दलालहरुले नै मिलाउँछन् ।
चुनावलगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडापनि बढ्याे, आजदेखि नयाँ दर लागू
२२ घण्टादेखि रोकिएको पाँचपोखरीकाे मतगणना अझै सुरु हुन सकेन बुटवलका १९ वडामध्य १२ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन वडा कस्ले जिते? यस्ताे छ डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम ४१० स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति स्थानमा अग्रता ? देवदहमा गठबन्धनलाई पछि पार्दै एमाले : मेयर, उपमेयर दुबैमा अग्रता नवलपरासीको सरावल अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी बुटवलमा पाण्डेको साढे ४ हजार मतले अग्रता, उप-प्रमुखमा सावित्रा अघि शुद्धोधनमा गठबन्धन दल कांग्रेसबाट बस्याल विजयी, उप प्रमुखमा एमालेकी ज्ञवाली भरतपुरमा गठबन्धनकी रेनु दाहालको अग्रता, मतान्तर फराकिलो बनाउँदै चुनावलगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडापनि बढ्याे, आजदेखि नयाँ दर लागू काठमाण्डौंमा बालेनको अग्रता कायमै, स्थापितभन्दा करिब दोब्बरले अघि गैंडाकोट नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित बालेन र सुनिता हजारौं मतले अगाडि रुपन्देहीको कञ्चनमा कांग्रेसका ढकाल विजयी उम्मेदवारको मृत्युपछि स्थगित तुलसीपुर उपमहानगर-१७ मा मँगलबार मतदान सम्पन्न लुम्बिनीको घोराही उपमहानगरमा एमालेको अग्रता कायमै, ४०११ को मतान्तर रुपन्देहीका ६ वटै नगर उपप्रमुखमा एमाले उम्मेदवार अगाडि रुपन्देहीमा यु-१४ क्रिकेट लिग सुरु : उद्घाटनमा भैरहवा र सैनामैना विजयी बुटवल–६ मा नेपाली कांग्रेसको प्यानल विजयी विजय जुलुसमा सहभागी गाडी पल्टियो